अस्ति, हिजो र आज | मझेरी डट कम
कयौं प्रस्ताव दोस्रो विवाहको मलाई पनि नआएको होइन । मलाई मन पराउने नयाँ र पुराना कयौं पुरुषहरूले सम्बन्ध गाँस्न खोजेका पनि थिए । तर पनि म कसैको मायाजालमा नफसेर आफ्नै जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजिरहेकी थिएँ । अचानक उसले म भन्दा राम्री देखिने केटी सित विवाह गरेको थाहा पाएँ । कसैलाई मन नपर्ने मान्छे मलाई मात्रै मन परेको थियो । ऊ कालो र दुब्लो, म गोरी र हिसी परेकी, समाजले हाम्रो जोडी नसुहाएको पटक पटक भनिरहँदा पनि समाज र परिवारको कुरा नसुनी मैले उसकै पछि लागेर भागी बिहे गरेकी थिएँ । अस्ति सम्म ऊ मेरो लागि सुहाएको मान्छे थियो तर हिजो बाट अरूको विचारमा मैले पनि सहमति जनाउन बाध्य भएँ ।
सबै पुरुष त्यस्तै हुन्छन् त ? धेरैले मैले जस्तै दुःख भोगेका छन् त ? मलाई कुनै दुःख छ जस्तो पनि लाग्दैन । मैले त्यस्तो माया गर्ने मान्छेलाई अझै पनि घृणा गरेकी थिइन । तर हिजो बाट उसको कुरा गर्ने र सुनाउनेहरु प्रति पनि घृणा हुन थालेको थियो । अस्ति सम्म केही लेख्न पनि मन थिएन, हिजो पछि आज लेखिहाल्न पनि हतार भएको छ । निष्ठुरी, घमण्डी र विश्वासघाती एक व्यक्ति जसले मलाई धेरै माया गर्थ्यौं, जसले हाम्रो सन्तानलाई धेरै माया गर्थ्यो र जसलाई मैले पनि धेरै माया गर्थें त्यसको व्याख्या गर्न अब कलममा मसीको साटो आँशु भर्नु पर्ने भयो अनि कापीको पानाको साटो आकाश तिर लेख्नु पर्ने होला । तर सुरुवाती समयमै आँशु त रित्तिसकेको थियो ।
उसले जस्तो मैंले पनि नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर्न नहुने नै हो त ? म सँग कोही केटा असल मित्र बन्न खोज्दा पनि समाज र परिवारले प्रश्नहरूको पहाड खडा गरिदिन्छ । मलाई पनि कोही केटा सित केही कुरा गर्नु पनि मन छैन । मैले नयाँ जिन्दगी सुरु गर्छु भनिहाले भने मलाई जन्माउने मेरै आमालाई पनि धेरै दुःख हुनसक्छ । आफ्नो सन्तानले फेरि फेरि त्यही परिस्थितिको सामना गर्नु नपरुन् भन्ने हरेक परिवारको सोच हुन्छ । त्यसैले मैले चित्त बुझाएर बसेकै छु । मेरो सन्तानको हेरविचार अब मैले नै गर्नु पर्ने अर्को कर्तव्य छ । तर यो स्वार्थी र घमण्डी सम्बन्धमा बाँधिनेहरुको जमातले आज मायालाई वासना र सम्पत्ति सित तुलना गर्न थालेका छन ।
म कति मजबुर छु । कोही असल साथी बन्न खोज्ने साँच्चै असल केटाहरु सित हाँसेर बोल्न पनि सक्दिन । कसैलाई मेरो मनको इच्छा व्यक्त गर्न पनि सक्दिन । यो समाजले गलत नजरले हेरी दिएपछि म एक्लै रमाउन खोज्नु बेठीक नहोला । म कमजोर छैन भन्दा भन्दै पनि आफूलाई कमजोर महसुस गराउनेको पनि कमी नभएको होइन । सिमित साथीहरूसित सिमित समाजमा सिमित इच्छाका साथ सिमित जीवन बाँच्न अब म मजबुर छु । कसै सित यसको समाधान छैन थाहा हुँदा हुँदै कोही एकलाई मिल्ने साथी बनाएर मिल्ने नमिल्ने सबै कुराहरू भन्न बाध्य छु । मन हलुका गर्न भएपनि मेरो पीडा अरूलाई सुनाएर बसेकी छु ।
नयाँ जीवन मैले पनि सुरुवात गर्नु पर्छ भन्नेको एउटा जमातले सायद पहिला पनि मलाई बुझाउन सकेका थिएनन् र आज पनि बुझाउन सकेका छैनन् । नयाँ जीवन उसले अस्ति सुरुवात गरिहाल्यो । हिजो अलि धेरै पीडा भयो । आज म सहनशील छु । आज म सकारात्मक छु । नयाँ ऊर्जा थपिएको छ । आज पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएकी छु । अब कुनै बाधा अवरोध नहुने पक्का भो । अस्ति सम्म अन्यौलमा थिएँ, हिजोले नौलो सिकाएर गयो, आजको गन्तव्य स्पष्ट छ ।
बाल्यकालको मेरो गाँउ
यो के हो
गाउँ घरको सम्झनाले